YoYarLay - Neti Pot - နှာခေါင်းတွင်း သန့်စင်ခြင်းအတွက် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး (၆)မျိုး
Neti Pot - နှာခေါင်းတွင်း သန့်စင်ခြင်းအတွက် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး (၆)မျိုး
Neti Pot ကို နှာခေါင်းတွင်း ရှင်းလင်းသန့်စင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူသည် သန့်စင်သော ရေနှင့် ဆားတို့၏ ပျော်ရည်တစ်ခုဖြင့် ထိရောက်လျှင်မြန်စွာဖြင့် Neti pot ကို အသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ ပစ္စည်းလေး (၂)မျိုးတည်းပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
နှာခေါင်းကို ယားယံကျဉ်းစပ်ပြီး ပိတ်ဆို့နေတဲ့ နှပ်၊ နှာရည်များ ရှိနေသည့်အခါ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း neti pot ကို သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ အေးမိခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်းများနှင့် နှာပိတ်ခြင်းများဖြစ်သော အထွေထွေနှာခေါင်း ပြဿနာများအတွက် neti pot ကို အသုံးပြုရန် ဆရာဝန်များက အကြံပြုထောက်ခံထားပါတယ်။
လက်တွေ့ကျင့်သုံးသော မိသားစုဆရာဝန် ၃၃ဝဦးထံမှ လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ၈၇% သည် ဆားငန်အသုံးပြု နှာခေါင်းရှင်းလင်းခြင်းအား အကြံပြုထောက်ခံထားပါသည်။ တာရှည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ကူးစက်မှု (91%)၊ ကြီးမားသော ဘတ်တီးရီးယားပိုးနှင့်ဆိုင်သော အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ကူးစက်မှု (67%)၊ ရာသီအလိုက် ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားသော နှာခေါင်းရောင်ရမ်းခြင်း (66%)၊ အထက်ပိုင်း အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါ (59%)၊ အခြား ဓာတ်မတည့်သော နှာခေါင်းရောင်ရမ်းခြင်း (48%)၊ နေမထိ ထိုင်မသာဖြစ်အောင် ပိတ်ဆို့ခြင်း (48%) နှင့် ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်း (17%) စတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာများအတွက် ကုသမှုအဖြစ် အကြံပြုထောက်ခံထားကြပါတယ်။
နှာခေါင်းပေါက်မှတဆင့် အသက်ရှုရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည့်အပြင် များစွာသော neti pot သုံးစွဲသူများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အနံ့အာရုံနှင့် အရသာအာရုံကိုလည်း ရရှိကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ FDA ရှိ ဆရာဝန်များ ပြောကြားချက်အရ Neti pot များကို သေချာစွာ ဆေးကြောသန့်စင် အသုံးပြုနေသရွေ့ ဘေးကင်းစိတ်ချ ရကြောင်း ပြောဆိုထားပါသည်။ ယခုအခါတွင် ဒေသခံ ဆေးဆိုင်များ၊ ကျန်းမာရေး အစားအသောက်ဆိုင်များတွင် neti pot များကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Neti Pot ဆိုတာ ဘာလဲ?
Neti Pot ဆိုတာ နှာတွင်းလမ်းကြောင်းကို သန့်စင်ပေးတဲ့ ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Neti pot ဟာ လက်ဖက်ရည်အိုးငယ်လေးနဲ့ ပုံစံတူပြီး အများအားဖြင့် ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် ကြွေထည်နဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ Neti pot ရဲ့ မူလအရင်းအမြစ်က Ayurvedic medicine မှာ ရှိပါတယ်။ “Neti” ဆိုတာက ဟိန္ဒူဘာသာစကားလိုတော့ “နှာတွင်းသန့်စင်ခြင်း” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
Neti pot က ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သလဲ?
နှာခေါင်းပေါက်အတွင်း ကသိကအောက်ဖြစ်နေတဲ့ အရာများနဲ့ နှပ်များကို လျော့ပါးသက်သာစေရန် နှာတွင်းဆေးကြောခြင်းကို Neti pot ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ပိတ်ဆို့မှုများ လျော့နည်းစေပြီး နှာခေါင်းမှတဆင့် အသက်ရှုခြင်းကို ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Neti pot ကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလုပ်ဆောင်ခြင်းများကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ အရာတစ်ခုအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ Cilia လို့ ခေါ်တဲ့ အမွေးအမျှင်နဲ့ တူတဲ့ တည်ဆောင်ပုံများဟာ သင့်ရဲ့ နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ လေလမ်းကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုင်းတားပေးထားပါတယ်။ ဆားပျော်ရည် ပါဝင်တဲ့ နှာတွင်း သန့်ရှင်းခြင်းဟာ နှာပိတ်ခြင်းပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ နှပ်နဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အမှုန်အမွှားများ (ဖုန်မှုန့်၊ ဝတ်မှုန်များ) ကို ရှင်းလင်းရာမှာCilia ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
သန့်စင်ထားသော ရေနှင့် ဆား သို့မဟုတ် Neti pot တွင် အသုံးပြုရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ဆားအရောအနှောကို Neti pot အတွင်း ထည့်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင် အိမ်မှာပဲ Neti pot ပျော်ရည် ပြုလုပ်မယ် ဆိုရင်လည်း အလွန်ကို လွယ်ကူပါတယ်။ Neti Pot အတွင် ရေတစ်မျိုးတည်းပဲ ဘာကြောင့် သုံးလို့ မရဘူးလဲဆိုတာ သိချင်နိုင်လောက်ပါတယ်။ ရေတစ်မျိုးတည်း အသုံးပြုရုံနဲ့ နှာခေါင်းပေါက် အတွင်းရှိ ကျိန်းစပ် ယားယံခြင်းကို အမှန်တကယ် သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ သန့်စင်တဲ့ ရေထဲကို ဆားပေါင်းထည့်ခြင်းဟာ နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းများရဲ့ ထိခိုက်မခံတဲ့ အမြှေးအမျှင်ကနေတဆင့် ရေကို ဖြတ်သန်းသွားစေပါတယ်။
အသုံးပြုခြင်း၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး (၆)မျိုး
အိန္ဒိယတွင် နှာခေါင်းပေါက်မှတဆင့် ဆားငံရည် နွေးနွေးဖြင့် သန့်စင်ခြင်းကို နှာပိတ်ခြင်းနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း များအတွက် အသုံးပြုလာခဲ့သည်မှာ ရာစုနှစ်များစွာ ရှိနေပါပြီ။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့သည် ဖုန်မှုန့်များ၊ ဝတ်မှုန်များ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် အမွှေးရနံ့များစသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကြောင့် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းအား တွေ့ကြုံခံစားရနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Neti pot သည် နှာခေါင်းပေါက် သန့်စင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းကို လျော့ကျစေရန် အကောင်းဆုံး ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့အကြောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ Neti pot များသည် မလိုလားအပ်သော အမှုန်အမွှားများနှင့် နှပ်များကို သန့်ရှင်းရာတွင် ပိုမိုကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်ပြီး စပ်ဖျဉ်းနာကျင်မှု လျော့နည်းစေသည့် အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အအေးမိခြင်း၏ မလိုလားအပ်သော ရောဂါလက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုသည် နှာပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နှာပိတ်ခြင်းနှင့်အတူ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် မျက်နှာပြင်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများလည်း လိုက်ပါလာနိုင်ပါသည်။ အအေးမိခြင်းကြောင့် နှာခေါင်းရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် Neti pot ကို အသုံးပြုသည့်အခါ နှပ်များကို ပိုမို လွယ်ကူစွာဖြင့် ရှင်းလင်းပစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် များစွာသော အအေးမိခြင်း ရောဂါလက္ခဏာ များကို သက်သာရာရစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် Neti pot အသုံးပြု၍ နှပ်များ လျော့ကျစေရန် ရေများများလည်း သောက်ပေးသင့်ပါသည်။
Neti pot သည် ကြီးမားသော အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကူးစက်ခြင်းကို ကူညီထောက်ပံ့ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင် ရုံသာမကဘဲ တာရှည်နှာပိတ်ခြင်းကိုလည်း လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်ပါသည်။ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ကူးစက်ခြင်းမှ ခံစားနေရသော လူနာများသည် ရောဂါလက္ခဏာများ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ခဲ့ပြီး ခြောက်လကြာ ကောင်းမွန်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကနေဒါဆေးဝါးအဖွဲ့အစည်း ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော လေ့လာချက်တစ်ခုက ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသည်။ခေါင်းကိုက်မှု လျော့နည်းပြီး ဆေးဝါးများ အသုံးပြုမှု လျော့နည်းခြင်းများလည်း တွေ့ကြုံခံစားရခဲ့ပါသည်။ Neti pot များသည် နှာခေါင်းပြဿနာများအတွက် အထောက်အကူပြုကြောင်းကိုလည်း Macquarie တက္ကသိုလ်ရှိ ပါမောက္ခဖြစ်သူ Dr. Richard J. Harvey မှ ထောက်ပြပြောကြားထားပါသည်။ Neti pot သည် အမှုန်အမွှားများနှင့် နှာရည်များအား ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် နှာခေါင်းသန့်စင်ခြင်းကို အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် နှစ်စဉ် ဓာတ်မတည့်မှု ခံစားရသော သန်းပေါင်းများစွာသော လူများတွင် ပါဝင်နေလျှင် Neti pot ကို အသုံးပြုခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီအလိုက် ဓာတ်မတည့်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများဟာ အများအားဖြင့် နှာပိတ်ခြင်းနဲ့ နှာရည်ယိုခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ “နှာခေါင်း သန့်ရှင်းခြင်းဟာ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေတဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ နှာခေါင်းအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ သန့်စင်ခြင်းတစ်ခုလိုပါပဲ။” လို့ Michigan Sinus Center ရဲ့ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ M.D ဖြစ်သူ Melissa Pynnonen ၏ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Neti pot နဲ့ နှာခေါင်း သန့်စင်ခြင်းဟာ ဖြစ်နေကျ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပြဿနာများအတွက် ဆေးဝါးများထက် ပိုမို ထိရောက် ကောင်းမွန်ကြောင်း ပြောကြပါတယ်။ “ဖြစ်ပွားနေကျ နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ရောဂါလက္ခဏာများအတွက် ရှေးဦးကုသမှုတစ်ခု” လို့ Dr. Pynnonen ကဲ့သို့ ဆရာဝန်များစွာက ယူဆကြပါတယ်။
ဆားပျော်ရည်ဖြင့် နှာတွင်းသန့်စင်ခြင်းသည် ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားသော နှာတွင်းရောင်ရမ်းခြင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့် ဘေးကင်းစိတ်ချရပြီး စရိတ်စက မများသော နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းနှာခေါင်းပိတ်ခြင်းနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း အမေရိကန်ဂျာနယ် တွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့သော ၂ဝ၁ဝ သိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်လေ့လာချက် တစ်ခုတွင်လည်းအတည်ပြုထားပါသည်။ ဓာတ်မတည့်ခြင်း ခံစားနေရသူများအတွက် အလုံးစုံ အရည်အသွေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ဓာတ်မတည့်သည့်ဆေးဝါးများအတွက် လိုအပ်ချက်ကိုလည်း လျော့နည်းစေပါသည်။
၅) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပြဿနာများ
အချို့သော အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရာတွင် အစားအသောက်များအား အာသာပြင်းပြ ချဉ်ချင်းတက်ခြင်းနှင့် မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း သာမန်ထက် ပိုမို၍ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲများကြောင့် အချို့သော ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများသည် နှာပိတ်ခြင်းကို အများအားဖြင့် တွေ့ကြုံခံစားရတတ်ပါသည်။ မိခင်လောင်းများအတွက် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ကူးစက်ခြင်းနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းများကြောင့် နှာပိတ်ခြင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် နှာတွင်းသန့်စင်ခြင်းသည် ဘေးကင်းစိတ်ချရပြီး ထိရောက်မှုရှိသော အိမ်တွင်းဆေးမြီးတိုတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့သော ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက အကြံပြုထားပါသည်။
နှာပိတ်ခြင်းသည် နှာချေခြင်းကို ဖြစ်စေလျှင် နှာခေါင်းပွင့်စေရန် Neti pot က အကူအညီ ပေးနိုင်ပါသည်။ နှာပိတ်ခြင်း ပျောက်သွားသည်နှင့် မလိုလားအပ်သည့် နှာချေခြင်း အလေ့အထကို ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Neti pot သည် နှာချေခြင်း ကင်းဝေးသော အိပ်စက်ခြင်းကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
မှန်ကန်စွာ ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ + အိမ်လုပ် Neti Pot ပျော်ရည်
Net pot အတွင်း ထောက်ခံထားပြီး ဘေးကင်းစိတ်ချရသော ရေအရင်းအမြစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုရန် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ FDA ပြောကြားချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါတို့ကိုသာ neti pot အတွက် အသုံးပြုရန် လက်ခံနိုင်သည့် ရေများ ဖြစ်ကြပါသည်။
• စတိုးဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူနိုင်သော ပေါင်းပြန်ထားသော ရေ သို့မဟုတ် သက်ရှိအနုဇီဝ ကင်းလွတ်သော ရေများ
• အနည်းဆုံး ၃မိနစ်မှ ၅မိနစ်အထိ ကျိုချက်ထားသော ရေပေါက်ခေါင်းရေ (အသုံးမပြုခင် အအေးခံပါ)
• ၂၄နာရီကြာအောင် သန့်ရှင်း၍ ပိတ်လှောင်ထားသည့် ဘူးတစ်ခုအတွင်း သိုလှောင်ထားသော ကျိုချက်ထားသော ရေ
• ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရောဂါကူးစက်စေနိုင်သည့် ဇီဝရုပ်များကို စစ်ထုတ်ရန် ပုံစံထုတ်ထားသော ရေစစ်မှတဆင့် ခံထားသော ရေ
ပျော်ရည်အတွက် ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရည်များကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် သင်ကိုယ်တိုင် အိမ်လုပ် neti pot ပျော်ရည်ကို ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အိုင်အိုဒင်း မပါဝင်သော ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတစ်ပုံခန့်မှ တစ်ဝက်ခန့်နှင့် သန့်စင်ထားသော ရေတစ်ခွက်နှင့် ရောစပ်ပါ။ ဆန္ဒရှိလျှင် မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ တစ်ဆိတ်စာခန့် ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ရေနှစ်ခွက်စာကို အသုံးပြုလျှင် ဆားနှင့် မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါကိုလည်း နှစ်ဆ ထည့်သွင်းရပါမယ်။
အခြားအပိုပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပါဝင်သော Neti pot အတွင်း ဆားကို အသုံးမပြုခြင်းဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်လုပ် neti pot ပျော်ရည် ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုသော ဆားတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းကိုသာ အသုံးချင်နိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်သော ပျော်ရည်တစ်မျိုးကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ ကိုယ်ပိုင်တစ်သျှူးများ၏ ဆားနှင့်ရေ ချိန်ညှိမှုကို ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ပျော်ရည်အတွင်း အသုံးပြုရန် ပင်လယ်ဆား သို့မဟုတ် ဟင်းချက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ရိုးရိုးဆားများကို သုံးနိုင်ပါသည်။ Neti pot အတွင်း အသုံးပြုရန် ပျော်ရည် ရရှိသည်နှင့် လက်များကို ဆေးကြော၍ အခြောက်ခံပါ။ ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့ neti pot ကို အသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
Neti pot အသုံးပြုနည်း
၁) ဘေစင်တစ်ခုအတွင်း ခါးရှေ့ကိုင်းထား၍ ခေါင်းကို ဘေးဘက်သို့ (၄၅ဒီဂရီခန့်) စောင်းထားပါ။ Neti pot ၏ နှုတ်သီးကို အပေါ်ဘက် နှာခေါင်းပေါက်အတွင်း ထားပါ။
၂) ဖွင့်ထားသည့် ပါးစပ်မှတဆင့် အသက်ရှု၍ ထိုအပေါ်ဘက် နှာခေါင်းပေါက်အတွင်းသို့ ဖြည်းညင်းစွာ လောင်းထည့်ပါ။ Neti pot ပျော်ရည်များ အောက်ဘက်နှာခေါင်းပေါက်မှ ထွက်လာကြောင်း တွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့အရာပါ။ နှာခေါင်းသန့်စင်ခြင်း စတင်ပါပြီ။
၃) တခြားတစ်ဖက်ကို ထပ်မံပြုလုပ်ပါ။ Neti pot ပျော်ရည်တစ်ဝက်ခန့်စီကို နှာခေါင်းပေါက်တစ်ဖက်စီတွင် ချိန်ရွယ်အသုံးပြုပါ။
အချိန်၆မိနစ်ထက် ပိုမကြာတဲ့အတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ နှာခေါင်းပေါက်တွင်းမှာ အရည်များ ဖိတ်စင်ကျလာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ညစ်ပတ်ပေရေ ဖိတ်စဉ်ခြင်း မရှိစေရန် ဘေစင်အပေါ်မှာ ခါးကို သေချာကိုင်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပြီးရင် ရေကွက်လေးတွေ ကျန်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ အမြန်ခြောက်သွားပြီး ဘာအစွန်းအထင်းမှ ကျန်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မှားတတ်သော အမှားများနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ
ပထမဆုံး နံပါတ်တစ် အန္တရာယ်ကတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဘတ်တီးရီးယား ပါဝင်တဲ့ ရေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Neti pot အတွင်း ရေပိုက်ခေါင်းရေကို မကျိုချက်ဘဲ အသုံးပြုလျှင် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အကြုံပြုထားသည့် ရေအရင်းအမြစ်များကိုသာ အမြဲ အသုံးပြုပါ။ သေစေလောက်သည့် ဘတ်တီးရီးယားပါဝင်သော ရေကို အသုံးပြုမိလျှင် Neti pot ကြောင့် သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ ၂ဝ၁၁ခုနှစ်က မသင့်လျော်သော Neti pot အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် သေဆုံးမှု အနည်းဆုံး ၂ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သေဆုံးမှု ၂ခုစလုံးသည် အလွန် အန္တရာယ်ရှိသော ဘတ်တီးရီးယား အမျိုးအစားဖြစ်သည့် Naegleria fowleriပါဝင်သော ရေပိုက်ခေါင်းရေကို အသုံးပြုမိ၍ ဖြစ်သည်။
Naegleria fowleri သည် amebic meningoencephalitis (PAM) ဟုခေါ်သော ဦးနှောက်ရောဂါကူးစက်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ PAM ၏ ရောဂါလက္ခဏာများသည် ကူးစက်ခံရပြီးနောက် တစ်ရက်မှ ၉ရက်အတွင်း စတင်တတ်ပါသည်။ ပထမတွင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်းနှင့် ပျို့အန်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းအဆင့် ရောဂါလက္ခဏာများတွင် လည်ပင်းတောင့်တင်းခြင်း၊ ထိတ်လန့်တကြား ဖြစ်ခြင်း၊ လူများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အား အာရုံစိုက်မှုလျော့နည်းခြင်း၊ စိတ်မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ တက်ခြင်းနှင့် အာရုံချောက်ချားခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ရောဂါသည် အခြေအနေ ဆိုးဝါးမှု လျှင်မြန်၍ ၅ရက်ခန့်အတွင်း သေဆုံးနိုင်ပါသည်။ ဒီအချက်ဟာ သင့်ရဲ့ neti pot အတွင် သင်အသုံးပြုတဲ့ ရေနှင့်ပတ်သက်ပြီး သန့်ရှင်းချင်ရသည့် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခု အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်။
သန့်စင်ထားသော ရေကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် သင့်ရဲ့ neti pot ကိုလည်း အလွန်သန့်ရှင်းအောင် ထားရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင်အသုံးပြုသည့်အခါတိုင်း ဘတ်တီးရီးယားများကို ကာကွယ်ရန် သန့်စင်သည့်ရေဖြင့် နှံ့နှံ့စပ်စပ် ဆေးကြောသန့်ရှင်းပါ။ Neti pot ကို လေသလပ်ခံ၍ အခြောက်ခံခြင်းသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် တစ်ရှုးဖြင့်လည်း ခြောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Neti pot ကို အသုံးမပြုခင် သင့်ရဲ့လက်များကို သေချာစွာ ဆေးကြောသန့်စင်၍ အခြောက်ခံထားပါ။
Net pot သည် သွားတိုက်တံနှင့်တူပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါ။ သင့်ရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့ မျှဝေသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုသက်သာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဟာ ဘေးကင်းစိတ်ချရမှု မရှိဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း မညီညွတ်ပါဘူး။
နောက်ထပ် အများအားဖြင့် မှားတတ်တဲ့ အမှားကတော့ neti pot ကို အလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသော သဘာဝ ဆေးမြီးတိုများအတိုင်း အလွန်အကျွံ အသုံးပြုခြင်းဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးရလဒ်ကို ဖြစ်စေမှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် ပြဿနာတွေကိုသာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ နှာခေါင်းသန့်ရှင်းခြင်းကို ကာလတို ပြုလုပ်ခြင်းဟာ အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ကျန်းမာစေပေမယ့် ကာလရှည် အသုံးပြုခြင်းကတော့ အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ Neti pot ကို အလွန်ပုံမှန်သုံးစွဲခြင်းဟာ နှာတွင်း အမြှေးအမျှင်များကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ အရာအချို့ကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သင့်ရဲ့ neti pot ကို သေချာစွာ အလွန်အကျွံ မသုံးစွဲမိအောင် ရှိပါစေ။
Neti pots များကို ကလေးငယ်လေးများအတွက် အသုံးမပြုပေးသင့်ပါ။ Neti pot အသုံးပြုပြီးနောက် သက်တောင့်သက်သာမရှိခြင်း မလိုလားအပ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ခံစားရရင် အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပစ်ပြီး ဆေးဝါး ရှာဖွေအသုံးပြုပေးပါ။
Ref :Health : Neti Pot -6Health Benefits of Nasal Irrigation